UBlack Coffee uchaza ngesimo abhekene naso ngedivosi
UDJ Black Coffee. Isithombe: Instagram
UPHROJUSA womculo weHouse ohlonishwayo kuleli uDJ Black Coffee usephinde waphefumula ngedivosi yakhe nenkosikazi yakhe u-Enhle Mbali.
Lo DJ ogama lakhe lokuzalwa nguNkosinathi Maphumulo ukhulume ngedivosi yakhe no-Enhle emsakazweni iYFM lapho achaze khona ngobunzima abhekane nabo ekuhlukaniseni impilo yakhe yomculo naleyo yasekhaya. Uthe ubona sengathi abantu bacabanga okungeyikho ngaye.
"Kuze kwafika esigabeni lapho ngibone ukuthi kuwukungedelela lento. Uma ngibona ezinye zezinto ezibhalwa kuTwitter ezibhekiswe kimina ngibona kahle ukuthi ukube yimina obebhale kanjalo ngabe abantu bafuna ngivalwe," kusho uBlack Coffee.
Uphinde wavula isifuba ngokuhlukunyezwa akuthole ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokusabalala kwezindaba zokwehlukanisa kwakhe nenkosikazi yakhe. Ngokusho kukaBlack Coffee okuningi kusuka kubantu abazibona benegunya lokwazi izindaba zakhe ebese balahlekelwa yinhlonipho.
"Kukho konke obekwenzeka empilweni yami, yize besibatshele abantu ukuthi lolu udaba sibhekana nalo ngasese, abantu bayaqhubeka beze ngoba bezibona benegunya.
FUNDA: 'Sichithe isikhathi esingangonyaka sizama ukulungisa'
"Akekho umuntu engimkweletayo. Angiyena umuntu wokuqala okulesi simo. Akekho umuntu ofile. Akekho umuntu ohlukunyeziwe. Akukho okubi okwenzekile. Sithathe isinqumo nje sokuthi yilokhu esifuna ukukwenza, kodwa abantu babona ukuthi kufanele baphawule ngalendlela yokuthi kwesinye isikhathi akubi nanhlonipho," kusho yena.
Ngasekuqaleni kwenyanga, u-Enhle uqinisekise ukugqashuka kwefindo labo lomshado ngemuva kwezinyanga abantu bekusola lokhu. Lo mlingisi wafaka ivideo ekhasini lakhe lika-instagram eqinisekisa izinsolo.